NOOCYADA FOOMAMKA LOOGU TALAGALAY WAX SOO SAARISTA DHAGXAANTA DHAGXAANTA. WAXAAN GACMAHEENA SAMAYNAYNAA - SAMEE NAFTAADA
Dhuxulada asfaltka ah ee dushooda ku jira roobka iyo qiiqa aan fiicnayn kulaylkii hore. Waxaa lagu beddelay marin habaabin, nadiif ah, marin wanaagsan, oo ku daboolan noocyo kala duwan iyo midabyo kala duwan. Qalabka caatada ah ee cawska lagu rido ayaa ka dhigaya aragti ah murugo aan caadi ahayn ee geeddi-socodka oo dhan ee abuurista jidadka curyaaminta ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa soo baxday in xirfadlaha guriga uu awood u leeyahay oo kaliya inuu dhagaxyada dhagxaan dhagax ah oo kali ah oo qurux badan, laakiin sidoo kale si ay u sameeyaan.
Noocyada dhagxaanta dhagxaanta
Dhexdhexaadinta, waxyaabo kale, way kala duwan yihiin sababtoo ah kala duwanaanshaha qalabka laga sameeyay. Sida laga soo xigtay muuqaalkan, waxaa badanaa loo qaybiyaa saddex nooc:
la taaban karo;
fiilo clinker ah;
dhagax laga sameeyey dhagax dabiici ah.
Noocaan dhagaxa dhagaxa ah wuxuu leeyahay sifooyinkiisa:
Dhagaxyada dhagaxyada noocaas ah looma dhejin karo saafi saafi ah, laakin waxaa lagu daraa waxyaabo badan oo tayo sare leh tayada labadaba marka la eego waxqabadka, iyo muuqaalka muuqaalka.
Marka loo eego habka wax soo saarka, furka la taaban karo wuxuu u qaybsan yahay qaabka wax-qabadka iyada oo la adeegsanayo qalalaaso iyo lagu cadaadiyay cadaadiska sare.
Gawaarida Vibro-beton wax laga sameeyey ayaa waxay muujinaysaa waxqabadka liidata, maaha mid aad u xoogan, oo la xariira abrasion iyo waxyeellada burburka ee barafow. Dareeshiyooyinka la taaban karo ayaa leh dabeecado waxoogaa wanaagsan. Guud ahaan, dariiqa la taaban karo waxaa lagu gartaa helitaanka iyo kharash yar. Intaa waxaa dheer, waa noocyo kala duwan oo lagu qurxiyo, taas oo ay la socoto caawinaadda dheeraadka ah ee lagu daro noocyada kala duwan ee midabka kala duwan.
Ma taqaanaa? Dhagaxyada dhagaxyada casriga ah waxa lagu gubay lebenkii dabka, iyadoo waddooyinka Mesopotamia Ancient lagu rasaaseeyey shan kun oo sano ka hor.
Dhagax clinker oo laga helay dabka dhoobo culus ayaa leh hanti aad u sarreeya sababtoo ah maqaar la'aanta waxaa ku jira, taas oo siinaysa adkeysiga qoyaanka iyo iska caabinta kala duwanaanshaha heerkulka. Intaa waxaa dheer, dhagaxan waa fududahay in lagu rakibo, sababtoo ah waxay leedahay dusha labada dhinacba, waxayna noqon kartaa laba jeer oo khafiif ah oo ka yaryar. Guryaha qurxinta ayaa sidoo kale aad u sarreeya ee clinker, laakiin qiimaha ay sidoo kale ka sarreeyaa tan dhagxaanta la taaban karo.
Dhagax dabiici ah
Dhagaxyada dhagaxa ah ee dhagaxa dabiiciga ahi waa kuwo adag oo adag. Gaar ahaan si fiican ugu habboon ujeedada this granite. In habka isticmaalka, waxtar ahaan ma siiyaan si loo tirtiro, qoyaanka iyo dhibco heerkulka, ma jabin iyo horjoogsanaya culus weyn. Hase yeeshee, kharashka badan ayaa ka baxsan noocyada kale ee daboolka.
Si loo dhagxaan dhagaxyo dhagxaan, waa in aad marka hore sameysid qaabab gaar ah, oo loo yaqaan 'Matrices'. Waxay ku shubeen xal ka kooban halbeeg, ka dib markii ay adag tahay in la soo celiyo dhammaan joomartooda iyo muuqaalka.
Laga soo bilaabo foomka loogu talagalay wax soo saarka gawaarida loo baahan yahay:
caabbinta sare ee farsamada farsamada;
iska caabin xoog leh;
Maareeyaha guriga wuxuu si madaxbannaan u awoodaa inuu sameeyo qiyaasta:
Baro sida loo tuuro foornada xayawaanka ah ee kuyaala agagaarka magaalada, ka samee jidka qoryaha, xoqida iyo foornada.
Naqshadaynta caaggu waa qaabka ugu kalsoonida badan oo adkeysan kara oo adkeyn kara ilaa kun oo buuxa iyada oo aan la jajabin iyo iyadoo aan laga badinin foomka asalka ah waqtiga. Intaa waxa dheer, matrixka balaastikada si aad ah ayaa si sax ah ugu gudbaya dhagaxyada qaababka joomatariga ee loo baahan yahay iyo sawirka muhiimka ah. Qalabyada Silikicone waxaa lagu gartaa suugaan aad u sarreeya, taasoo fududeyneysa in alaabooyinka dhameeystiran ay ka baxaan.
Intaa waxa dheer, foomamka silikoonta way ka duwan yihiin:
Xoogga sare ee culus;
sifooyinka ugu fiican ee soo saarista ee wasakhaha for gypsum.
Faa'idooyinkooda waxaa ka mid ah:
Iskudhicir la'aanta ka jirta weerarka kimikalka
suurtogalnimada naqaska hawada ee wax-soosaarkooda oo si xun u saameynaya tayada qaababka.
Foomka qoryaha loogu talagalay soo saarida dhagaxyo macmal ah waxaa laga sameeyaa baararka aan caadiga ahayn. Tilmaamaha waxaa bixiya substrate gaar ah.
Faa'iidooyinka noocan ah ee jaantuskan waxaa ka mid ah:
fududaynta wax soo saar.
nolol aad u gaaban;
ku habboonaanta wax soo saarka taarikada qaabaysan.
Noocyada Polyurethane waxay ka tirsan yihiin noocyada caanka ah ee dhimashada ee soo saaridda dhagax macmal ah. Faa'iidooyinka shakiga ah waa:
adkeysiga kor u kaca.
Intaa waxaa dheer, poliurethane wuxuu leeyahay dheecaan sare, taas oo u ogolaanaysa in dhejinta qiyaasta dhirta ay aad u saxdo si loogu celiyo sawirka tusaalaha asalka ah.
Ma taqaanaa? Markii ugu horeysay, farsamooyin macmal ah oo karti leh oo awood u leh inay ku tartamaan dhagax dabiici ah ayaa lagu soo bandhigay Nederland bilawgii qarnigii 19aad. Gaadiidka ugu horreeya ee dabiiciga ah waxaa laga sameeyey ciid, dhoobo la dubay iyo biyo.
Sidee ayaad naftaada u sameysaa
Ka hor inta aanad sameysaneynin qiyaasta dhagxaanta macmalka, waa inaad haysataa qaab mihnadeed oo matala muunada wax soo saarka mustaqbalka. Wixii wax soo saarkiisa ah ee cabbirka buuxa waxaa loo isticmaalay gypsum, dhoobo, qoryo, caag ama dhoobo. Dhagaxyada dabiiciga ah ee loo baahan yahay waxay ku habboon yihiin, iyo geed leh maaddo ku haboon, iyo walxo kale oo leh qaab qurux badan.
Iyo si aad u sameyso qaab leh matoorada polymeric ku shubtay, talaabooyinka soo socda waa in la sameeyaa:
Kordhinta moodeelka sayniska ee tufaaxa ama wax la mid ah xaashida.
Ka hortagga faafidda walxaha polymic (taas oo qaabka qaab-dhismeedku ku wareegsan yahay shaxan fogaan ah laba sentimitir oo ka soo wareega darbiga qaabka dusha sare). Heerka muraayadda waa in uu ka sarreysa moodeelka sheyga ee dhowr mitir.
Xiritaanka qalabyada derbiyada masarka ah ee dusha sare leh oo leh shaabbadeeyn si looga hortago ka daadinta polymerka dareeraha ee derbiyada.
Buuxinta dareeraha u dhexeeya badeecada wax lagu duubo ee udhaxeysa nooca iyo derbiyada jirridda ilaa dherarkooda buuxa.
Si aad u abuurto foom adigoo adeegsanaya moodeel, isticmaal:
polyurethane, caag, silikoon;
Nidaamka samaynta caaryarrada ka sameysan caag
Iyada oo ay joogaan qaab moodeel ah, shaqada ugu weyn ee halkan waa in la abuuro qaab wareegsan. Si tan loo sameeyo:
Diyaarso qoryo alwaax ah sida habka, oo ku hareeraysan qaabka, qaabka iyaga ka baxayaa ugu yaraan laba sentimitir inta u dhaxaysa nooca iyo derbiyada. Oo dhererkoodu waa inuu noqdaa ugu yaraan laba sentimitir oo ka sarraysa moodada.
La xiro baararka u dhexeeya nalka iyo ciddiyaha.
U samee qaabka mastarka ee saxda ah ee xariiqa masraxa, isagoo hubinaya in farqiga u dhaxeeya isaga iyo derbiyada jirku ay isku mid yihiin wareegga wareegga.
Buuxi farqigaas oo leh balaastiig ah dareeraha ilaa dhererka darbiga.
Ka bacdi saacad ka dib, mashiinka dhameystiran waa in laga saaraa. Wixii qaabkan ah, waxaad si fudud u demin kartaa.
Haddii aad heshid wax xakameyn ah, si fudud ayaa looga saari karaa waraaqaha ciidda.
Sicirka kiciya samaynta
Waxyaabaha ay ka kooban tahay silikoon gaar ah:
Wixii soo saaris ah ee sawir ah waa lagama maarmaan:
Ku soo dhawow tusaalaha asaasiga ah ee qaabka tusaalaha hore.
Saliidi nooca leh nooc kasta oo saliid ah.
Ku rid bartamaha qaabka.
Isku dar qaybaha silikoonta sida saxda ah ee ay soo saaraan soo saaraha.
Ku shub xal xalka ah ee dariiqa khafiif ah meel bannaanka ka ah qaabka ilaa qaabka. Meelaha hawadu waa inaysan dhicin.
Kadib markii silicone ay adkeyd 24 saac gudahood, ka saar shaxanka diyaar u ah.
Video: Foomka Silikonka
Samaynta qaababka alwaax
Laga soo bilaabo qalabkan oo keliya qaabab kala duwan, qaab ah, qaabab badan, qaabab dheeman ah ayaa la helaa. Tani waxay ubaahantahay:
baararka qoryaha oo dherer ah oo bixiya faraqa 2-cm ee u dhexeeya qaabka iyo qaabka, iyo 2 sentimitir oo ka sarreeya qaabka;
sawir ama jigsaw;
Waxa kale oo aad xiiseyn kartaa inaad ogaatid sida loo daboolo saqafka oo leh asdulin leh gacmahaaga, sidaad si habboon ugu dhejin kartid derbiga derbiyada iyo sida loo kululeeyo daaqada jiilaalka.
Iyo soo saaridda qaabka ugu fudud ee laba jibbaaran aad u baahan tahay:
Calaamadda dusha sare ee dhismaha la abuuro.
U diyaari 4 baro leh dherer la siiyey.
Ka soo qaado shey iyaga ka mid ah oo horay ugu dhejisid cajalad fiiqan.
Xoojinta sawirka leh nalka.
Dhinaca gudaha ee qaabka si loo soo saaro waraaqo ciid ah.
Ku darso si ay u fududeeyaan ka saarista dhagax dhamaystiran oo ka samaysan caaryada.
Iskudhafyada u dhexeeya baararka si ay u hirgeliyaan shubka si looga hortago dheecaan.
Video: foomamka loogu talagalay foornada beerta
Soo saarida foomamka polyurethane
Matoorka Polyurethane waa mid adag, la isku halleyn karo oo la adkeyn karo. Wixii soo saaridooda waa in:
Isku darka poliurethane ayaa ku shubaya dhismaha baararka iyo moodooyinka sayniska ah, ka dib tusaalaha ka mid ah fursadaha hore.
Cidhifyada dusha sare ee dhismaha waa in kor loo qaadaa labo mitir oo siman si loo fududeeyo sii-deynta hawo nadiif ah oo ka timaadda polyurethane.
Ka dhig maalin qaboojiyaha.
Kaddib markaad ka saarto qaabka, foomka soo ifbaxay waa in la tagaa laba maalmood oo kale si adag ugu adag.
Fiidiyowga: Foomamka poliurethane
Waa muhiim! Sababo xaqiiqda ah in qalabkan uu soo saaro walxo waxyeelo leh, waxaa kaliya loo isticmaali karaa isticmaalka qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed.
Sida loo diyaariyo isku dar ah loogu talagalay soo saaridda dhagxaan dhagax ah
Si aad u hesho dhagaxyo tayo sare leh, waa inaad ku shubtaa qaab wanaagsan ugu yaraan isku dhafka wanaagsan. Waxay ubaahantahay inay lahaato:
Awood la'aanta biyo la'aanta biyaha;
iska caabin adag;
caabbinta farsamooyinka farsamada;
qaab dhismeed yar yar leh.
In la soo saaro ee dabaqyada yar ee loo isticmaalo laba hab oo wax soo saar:
adoo isticmaalaya qalabka wax lagu rido;
Dhaqdhaqaaqa isdaba-joogga ah, ee aad ku isticmaali kartid miiska jilbaha fudud ee lagu sameeyay gacantaada, waa habka kaliya ee loo heli karo farshaxan-yaqaannada guriga si loo helo dhagxaan dhagax ah guriga. Wixi-gelinta waxay u baahan tahay qalab qaali ah iyo shahaadooyin gaar ah oo ku saabsan dayactirka. Dhagaxyo waaweyn oo tayo leh, oo ay sameeyaan nafteena, ayaa badanaa lagu sameeyaa laba-dhajiye iyadoo lagu xoojinayo waxyaabaha lagu daro lakabyada (laakiin, dabcan, lakabka qudhka ah ayaa sidoo kale leh astaamaha lagama maarmaanka ah iyo sidoo kale waa sahlan inuu wax soo saaro). Marka hore, lakabka wejiga ayaa la sameeyaa, ka dibna waxaa aasaas u ah aasaas. Sidaa daraadeed, isku dar ah soo saarista daaqadaha waa laba nooc. Inta u dhaxaysa labada lakab ee foornada waxaa la dhigaa xoojinta wax, taas oo ah qayb ka mid ah biraha birta ah, la dhigo si ay u sameeyaan shabaqa. Hawlgalkan waxaa lagu bedeli karaa iyadoo lagu darayo xoojinta xajmiga naqshadaynta.
Waa muhiim! Mudada u dhaxeysa labadan hab ee waa in aysan aheyn in ka badan 25 daqiiqo si looga hortago daandaansiga ee foornada.
Isku darka lakabka wajiga. Si aad u hesho mitir laba jibbaaran oo ah dusha sare ee dariiqa, taas oo ah mid xoog leh oo baraf u adkaysta, waxay u baahan tahay:
Sibidhka PC500 - 3 baaldiyo;
dhagax yar oo la jajabiyey iyo ciid webiga isku qasan yahay oo loo siman yahay - 6 baaldiyo;
kala-soocidda iyo dheehidda dheeh qaab ah xal - 0.8 l;
biyaha - 8 l.
Sibidhka waa in lagu shubaa isku dar ah ciid iyo caagag iyo ka dib, ka dib isku dhafan, ku dar dhagax la jajabiyey oo ugu dambeyntii ku shub biyo ku filan. Cufnaanta xalinta keentay waa inay u egtahay kareemka qaro weyn, laakiin xalku waa inuu haysto awoodda si sahlan loogu qaybin karo mugga qaabka.
Video: diyaarinta bacda midabeysan ee dhagxaan dhagaxyo iyo foornada
Tayada dhagxaanta dhagxaanta ayaa si weyn loo hagaajiyaa marka la isticmaalo inta lagu jiro buuxinta shaxanka miisaska jilicsan. Vibration wuxuu ka dhigaa isku dhafka xumbooyinka hawada, wuxuu yareeyaa nacaybka gudaha ee badeecadaha, sidaas darteedna wuxuu sii adkeynayaa.
Isku duub maro lo'da. Waxaa loo diyaariyaa qiyaastii sida la mid ah sida lakabka wajiga, laakiin ma isticmaalayso dheeh iyo kala-soocid. Bixiyaha ayaa beddeli kara bacrimiyayaasha qaaliga ah, tusaale ahaan, qaabka dhuxusha. Isbeddelada qaarkood ayaa la socda iyo saamiga u dhexeeya isku-dariiqa qashinka iyo sibidhka, oo hadda ah 1: 3.
Waa muhiim! Marka la samaynayo caaryada dhagxaan dhagax ah, waxaa lagula talinayaa in si joogta ah loo soo saaro qoraallo xagal ah oo kuu oggolaanaya inaad sameyso dhinacyo iyo sidaas daraadeed ma gooyaan dhagxyada oo dhan.
Labada lakab ee foomka - waji iyo aasaasba - waa inay ahaadaan ugu yaraan labo sentimitir oo dherer ah. Foomamka daadadku waa in lagu qabtaa miiska jilicsan ee 5-10 daqiiqo, ka dibna dusha sare dusha sare, ku dabool foomamka filin oo ka bax inaad qalajiso 1-2 maalmood heerkul ah +15 ilaa +25 ° C
Fiidiyoow: samaynta isku-darka tayo-sare leh
Tiknoolajiyada casriga ah iyo qalabka casriga ahi waxay u oggolaanaysaa in xirfadlaha guriga uu sameeyo qaabab loogu talagalay wax soo saarka dhagaxyo tayo sare leh, kuwaas oo inta badan aan ka badnayn warshadaha warshadaynta warshadaha, sidoo kale xuduudaha hawlgalka ama guryaha qurxinta.
Fiidiyoow: foomamka guri-guri ee loogu talagalay xatooyada